Insert an Image · HTML 5
အခု ကျွန်တော်တို့တွေ ပုံလေးကို ထည့်ရအောင်။ ပြီးခဲ့တဲ့ code မှာ onepice_cover.jpg ဆိုတာလေးကို ထည့်ပါမယ်။ အောက်မှာ code လေးကို ကြည့်လိုက်ပါ။
<p>One Piece isaJapanese <span class='highlight'>shounen manga series</span> written and illustrated by Eiichiro Oda. It has been serialized in Weekly Shōnen Jump since August 4, 1997; the individual chapters are being published in tankōbon volumes by Shueisha, with the first released on December 24, 1997, and the 70th volume released as of March 2013. One Piece follows the adventures of <span class='highlight'>Monkey D. Luffy</span>,ayoung boy whose body gains the properties of rubber after unintentionally eatingaDevil Fruit, and his diverse crew of pirates, named the Straw Hat Pirates. Luffy explores the ocean in search of the world's ultimate treasure known as One Piece in order to become the next Pirate King.</p>
အထက်ပါ code မှာ <img src="onepice_cover.jpg"> ဆိုတာလေးကို တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီ code လေးက image ထည့်သွင်းမယ်လို့ ဆိုထားတာပါ။ image path ကို src မှာ ရေးရပါတယ်။ လက်ရှိ index.html နဲ့ ပုံနဲ့ သိမ်းထားတဲ့ နေရာ အတူတူမှာ ရှိတဲ့ အတွက်ကြောင့် src မှာ ပုံရဲ့ file name တစ်ခါတည်းရေးလို့ရပါတယ်။
လက်ရှိ file တွေက အောက်ဖော်ပြပါ ပုံအတိုင်း ရှိပါတယ်။
Figure 5-1. File Sturure
အထက်ပါ code ကို browser မှာကြည့်ရင် အောက်ကလို မြင်ရပါလိမ့်မယ်။
လက်ရှိ code ကိုပဲ အောက်မှာ နောက်ထပ် ပုံ တစ်ပုံ ထည့်ပါမယ်။
အထက်ပါ code မှာ <img src="images/luffy.png"> ဆိုပြီး ထည့်ထားတာကို တွေ့ရပါမယ်။ images ဆိုတဲ့ folder အောက်က luffy.png ကို သုံးမယ်လို့ ဆိုထားတာပါ။
Figure 5-3. File Sturure